Uyifaka njani indawo yokuhlamba ngakumbi? Qala kwezi nkalo zine, Ukuqinisekisa ukuba ukuJongwa kweNtle nokuSetyenziswa ngokuLungileyo!
Ikhaya / Blog / Uyifaka njani indawo yokuhlamba ngakumbi? Qala kwezi nkalo zine, Ukuqinisekisa ukuba ukuJongwa kweNtle nokuSetyenziswa ngokuLungileyo!
2021 / 04 / 10 uhleloBlog 6094 0
Uyilo lwegumbi lokuhlambela ukongeza kumgangatho kunye neetayile zodonga, ukhetho lwesitya, ikhabhathi yokucwangcisela ukucwangcisela ukwenza isipili ngento ebalulekileyo! Yenziwe ngokufanelekileyo, zombini intle kunye nomsebenzi wokugcina. Ukucwangciswa kakubi kunokukhokelela ekubumbeni, akukho lula ukuyigcina kwaye indawo yokugcina ayonelanga. Oku kulandelayo kukhetho lwesinki, isitayile sekhabhathi yokuhlamba, uyilo lwesipili kunye nohlalutyo lokukhanyisa, Iingxaki ezi-4 eziphambili kunye neendlela zokulwa ukubonelela ngamakhaya amakhulu namancinci ziyasebenza kwiphakeji yokuhombisa ye-lazy!
Indawo yokuhlambela ukukhetha i-countertop, phantsi kohlobo olwakhelweyo
okanye isitayile sebhasi yekholamu?
1, imodeli enzima, abantu abasebenza nzima abafanelekileyo: kwi-countertop
Iimbonakalo: uyilo lobume bamanqaku ayi-100, ngaphantsi kofakelo lwekhabhathi yokuhlambela, indawo yokugcina, utshintsho oluluqilimba oluninzi.
Phawula: ububanzi betafile abulungelanga ngaphantsi, kwaye ukufakelwa kweepompo kufuneka kulungelelaniswe ngokuhambelana nemikhwa yobuqu yokusebenzisa ukuphakama, ukunqanda ikhadi lokuhlamba izandla kunye nezinye iingxaki. Ukongeza, ngenxa yokuba kulula ukuvelisa izinto zokucoca ezingafakwanga, kulula ukuba kugcinwe ukutshiza, akukho lula ukugcina ukukhuthala kokucoceka.
2Ukuxinana okuninzi, abantu abangamavila abalungele: phantsi kohlobo olungisiweyo
Iimbonakalo: Sika i-countertop design design eyenza i-countertop ibonakale ibanzi kakhulu, ingagcinwa kwindawo ibonakala ikhudlwana, kwaye indawo encinci yokucoca indawo efile ukulungiselela ukugcinwa.
Phawula: umphetho womthungo kunye ne-countertop kulula ukufihla ukungcola, kwaye ukufakela kunye nokwakha kunzima.
3, izinto ezincinci, indlu encinci efanelekileyo: ikholam isitya / isitya esixhonywe eludongeni
Iimbonakalo: hlala kwindawo encinci ukugcina indawo eninzi, ilungele iipoyingi ezincinci, isiqingatha yoyilo lokuhlambela, kwaye kulula ukuyifaka nokucoca.
Phawula: indawo yokugcina ikhabhathi encinci yeyona nto ibaluleke kakhulu, kufuneka ukuba yenziwe kwezinye iishelfu zokugcina udonga, njengokunyusa ukubekwa kwezinto zokuhlambela.
Ukugcinwa kwegumbi lokuhlambela kugxile kwikhabhathi yokuhlambela!
Vula okanye ufihle, yeyiphi oyikhethayo?
1, izinto ezingaphantsi, njengoyilo olwahlukeneyo olufanelekileyo: iishelfu ezivulekileyo
Iimbonakalo: Utshintsho kwisitayile esishelufini kwizinto ezininzi, zinokusetyenziselwa ukuhlelwa kwebhasikithi okuguquguqukayo kwaye kulula ukufikelela kuko.
Phawula: Ukuba isithuba sinomswakama onzima, izinto zokugcina kunzima ngakumbi ukuzigcina, kukho indawo emanzi neyomileyo efanelekileyo ngokufanelekileyo.
2Izinto ezininzi, ezinje ngengcaciso emfutshane necocekileyo efanelekileyo: ukugcinwa kwekhabhinethi okuzimeleyo
Iimbonakalo: iingcango zekhabinethi, iidrowa, zonke izinto zicocekile kwaye zicocekile, kunye nokugcina ngokwaneleyo.
Phawula: Kufuneka ubeke ingqalelo kukhetho lwekhabhathi kunye nomnyango, kucetyiswa ukuba ukhethe izinto ezingangeni manzi, ukunqanda ukufuma kunye nokungunda. Uninzi lweekhabhathi zokuhlamba zihlala zisebenzisa i-fiberboard engenamanzi okanye ukwakheka kwebhodi ye-foam; Izinto zomnyango wekhabhathi yibhodi ye-foam kunye nebhodi ye-Menai njengobuninzi.
Isibuko esibaluleke kakhulu,
Ukukhetha isipili, yintoni ekucetyiswa?
1, eyenziweyo okanye engenachaphaza
Ngokusisiseko, uninzi lwabantu luya kukhetha ngokusekwe kubume, ukuba ngokwembono yolondolozo, ukucocwa kunye nokugcinwa kwendlela engenasiseko kunendlela ebekiweyo kulula ngakumbi. Ukuba akukho zimpawu zokuqinisekisa ukufuma kwezinto zesakhelo, kulula ukusebenzisa ixesha elithile ukuwohloka. Ukusuka kwindawo yokujonga ubuhle, kukho iindlela ezininzi kunye notshintsho kwisakhelo, ngakumbi izibonelelo zemodeli.
Izibuko ngokubanzi zinesiseko esichasene nenkungu kunye nomsebenzi wokulwa nokugqwala, ukuba indawo yokungenisa umoya yokuhlambela imbi okanye indawo ifumile, kuyacetyiswa ukuba kuthengwe ifilimu yokulwa inkungu okanye iarhente yokulwa inkungu ukuze yomelezwe.
Isibuko ukujikeleza, isikwere njengobuninzi, sinokusekwa kubungakanani bomhlaba wokuntywila. Ukukhethwa kwesipili akukhuthazwa ukuba ukhethe ubungakanani obukhulu kunesinki, umlinganiso obonakalayo ungalingani.
Izibane zodonga, iikhandlela zihombisa isitayile sokuhlambela,
Yintoni ukuhlawula ingqalelo kufakelo?
Emva kokukhanyiswa okuyisiseko kwendawo yokuhlambela kugqityiwe, abantu abaninzi baya kufaka iitshaneli kwindawo esinki, isiseko sedonga sokukhanya okuqaqambileyo, ukongeza isitayile sendawo.
Ufakelo kufuneka luchonge ubude kunye nendawo emva kwemingxunya yokomba ukulungisa ukukhanya eludongeni nakwisilingi.
Ingqwalaselo eyodwa kufuneka ihlawulwe kwisitayile sokukhanyisa, ukukhanya kunye nesithunzi, indawo yesipili kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuthintela ukuchaphazela umgca wokubona komyeni ohlola kunye nendawo yonke yokukhanyisa igumbi.
Ngaphambili :: Ukulungiswa kwakhona kwegumbi lokuhlambela, imivumbo emi-5 yokufumana utshintsho oluhle next: Faka iishelufu kwindlu yangasese, kwigumbi lokuhlambela kwangoko phila ngaphezulu kweemitha ezi-5 zesikwere!
2021 / 04 / 12 6694
2021 / 04 / 12 6643
2021 / 04 / 12 5627